Navoaka ny teti-bola Irlandey 'mbola tsy nisy toy izany'
Tetibola Irlandey "mbola tsy nisy toa azy" no naseho
Ny minisitry ny fitantanam-bola Irlandey Paschal Donohoe dia namoaka teti-bola "tsy mbola nisy toa azy teo amin'ny habe sy ny refy" hamahana ny fanambin'ny Covid-19 sy ny fifanarahana ara-barotra Brexit.
"Avy amin'ny lavenon'ny areti-mandringana dia hiara-manangana Irlandy matanjaka sy mateza kokoa isika," hoy izy tamin'i Dáil (trano ambany amin'ny parlemanta Irlandy).
Nilaza ny minisitra fa manodidina ny 10,25% no tsy fananan'asa amin'ny taona ho avy.
Hisy ny deficit tetibola € 21,5 miliara (19,5 miliara) amin'ity taona ity, hoy izy nanampy.
Ny Repoblikan'i Irlandy dia nandrakitra ambim-bola fanampiny tamin'ny taon-dasa, saingy nanantena i Andriamatoa Donohoe fa 20,5 miliara ny fatiantoka amin'ny taona ho avy.
Midika izany fa trosa nasionaly 219 miliara euro na 108% amin'ny harem-pirenena.
Na izany aza, nilaza izy fa ny teti-bolany dia hanome "trano bebe kokoa, fanatsarana ny fikarakarana ara-pahasalamana ary valiny nasionaly manokana amin'ny fiovan'ny toetr'andro."
Alohan'ny hanolorana ny tetibola, ny governemanta fiaraha-mitantana tripartite dia nilaza fa ny tarehimarika nomeny dia miorina amin'ny fiheverana fa tsy hisy ny fifanarahana ara-barotra EU-UK ary hanohitra ny mitohy ny tsy fahazoana antoka momba ny fiantraikan'ny toekarena Covid-19 .
Ny minisitry ny vola dia nanome toky 8,5 miliara euro ho an'ny serivisy ho an'ny daholobe voasakan'ny Covid-19 sy ny vola stimulus 3,4 miliara euro.
Nanambara Andriamatoa Donohoe fa noho ny olana izay miatrika lny sehatry ny trano fandraisam-bahiny sy fizahan-tany, ny VAT ho azy ireo dia hahena ho 9% raha 13,5% manomboka ny 1 Novambra hatramin'ny Desambra 2021.
'Tsy fahampian'ny hetaheta'
Nilaza tamin'ny Dáil izy fa tsy hisy fiovana lehibe amin'ny hetra miditra, fa ny hetra karbôna kosa dia hiakatra hisy fiantraikany amin'ny vidin'ny solika.
Ny vidin'ny fonosana sigara 20 dia hampiakatra 50% ka hatramin'ny 14 €.
Nilaza ny minisitra fa te-hiafara amin'ny fanamarihana fanantenana sy fahatokisan-tena ary nilaza ny amboara Nobel, Seamus Heaney, fa "raha afaka ririnin'ity isika dia afaka manao fahavaratra na aiza na aiza" .
Ny Unitiona Island Shared Island Unit ao Taoiseach dia hanara-maso teti-bola 500 tapitrisa € ao anatin'ny dimy taona ho avy hanatsarana ny fiaraha-miasa avaratra sy atsimo.
Taoiseach Micheál Martin dia namaritra ny famatsiam-bola ho "zava-dehibe amin'ny fanoloran-tenan'ny governemanta hampiasa ny fahafaha-manao feno amin'ny fifanarahana ny zoma tsara".
"Izy io koa dia manome làlana ho an'ny fampiasam-bola amin'ny hetsika vaovao manerana ny nosy amin'ny sehatry ny fikarohana, ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny tontolo iainana," hoy izy.
Ny mpitondra tenin'i Sinn Fein dia niresaka ny tetibola ho "tsy tapa-kevitra, tsy mihetsika loatra ary tsy mitady hambom-po".
Nilaza i Pearse Doherty fa tsy nanome toky ny mpiasa ho tratry ny latsaka an-tsambo ny hopitaly na ho any amin'ny hopitaly atahorana ny tsy hahazaka ny tahan'ny Covid-19 ny governemanta.
Nolazainy tamin'i Dáil fa € 6 miliara no mbola tsy natokana satria tsy fantatry ny firaisankina telo tonta izay hatao amin'ny vola.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.bbc.com/news/world-europe-54526382
Sarimihetsika sarimihetsika Hollywood misy ny toerana Brad Pitt Michael Jackson Leonardo DiCaprio Danny Trejo - Horonantsary
Kristen Stewart dia nanambara ny antony naniriany hiara-hiasa amin'ny talen'ny Elizabeth Banks amin'ny 'Charlie's Angels' - Video